Niteraka Korontana Tamin’ny Bilaogy Sri Lankey Ny Fandotoan-dresaka · Global Voices teny Malagasy
Niteraka Korontana Tamin'ny Bilaogy Sri Lankey Ny Fandotoan-dresaka
Voadika ny 24 Septambra 2017 5:32 GMT
(Marihina fa tamin'ny 4 Aprily 2006 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Ny fandotoan-dresaka anaty aterineto dia faritan'ny Wikipedia ho toy ny olona iray izay miditra ao anaty vondrom-piarahamonina iray, ao anaty sehatra fifanakalozan-kevitra iray, ary mandefa hafatra mandrangitra, mivantambantana na manafintohina izay natao hanelingelenana na hanoherana ireo mpikambana ao amin'ny sehatra na hanakorontanana ny adihevitra.
Raha fintinina, izany no nanjo ny vondrom-piarahamonin'ny bilaogy antserasera Sri Lankey nandritra ny roa herinandro izay. Ity no fotoana voalohany izay tena nanatrehan'ny tontolon'ny bilaogy Lankey ny fandotoan-dresaka antserasera na dia tsy zava-baovao aza izany.
Toa tena mahafantatra tsara ilay vondrom-piarahamonina sy ny mpikambana ao aminy ilay mpandoto resaka izay tsy rohizantsika eto noho ny tahotra ny hamahanana izany, zavatra izay tsy fahita matetika amin'ny karazana mpanakorontana mitovy aminy.
Ny tena mahaliana indrindra anefa dia ny zavatra mameno ny bilaogy. Feno hafatra somary mivantambantana ka hatrany amin'ny hafatra tena manakorontana ny toerana fanehoan-kevitra amin'ny lahatsoratra voatafika, ahitana karazana fitenenan-dratsy samihafa. Niezaka ny hamintina ny zava-nitranga tao anatin'ny bilaogin-dahatsoratro manokana aho, izay mamelabelatra, ankoatra ireo zavatra hafa, ny mety ho fanazavana ity fihetsika ity.
Amin'ny ankapobeny anefa, somary nandalo fitotonganana ny vondrom-piarahamonina .lk , amin'ny nitsaharan'ny bilaogera maro tamin'ny famoahana lahatsoratra noho ny fahatahorana ho lasibatry ilay vahiny vao tonga. Ny lafiny tsara na izany aza dia manambara ireo zava-nitranga vao haingana ireo fa tonga ihany ny vondrom-piarahamonina mamahana ny bilaogy antserasera ao Sri Lanka. Ary mazava ho azy, aza adinoina velively fa mitondra fitsapana ny tranga .